Chebe kọmputa gị na ping | Site na Linux
1 Banyere iwu ping
2 Otu esi enyocha ma ọ bụrụ na anyị emeela nhọrọ nzaghachi ping
3 Ndị ọzọ iji chebe onwe anyị pụọ na mwakpo ping
Banyere iwu ping
Site na usoro ICMP, ya bụ, iwu a ma ama ping anyị nwere ike ịmata ma ọ bụrụ na kọmpụta ụfọdụ dị ndụ na netwọkụ, ọ bụrụ na anyị nwere ụzọ gasị, enwere m ike ịga ije na ya na enweghị nsogbu.
Ruo ugbu a ọ dị ka ọ bara uru ma ọ bụ, n'agbanyeghị ọtụtụ ngwaọrụ ma ọ bụ ngwa dị mma, enwere ike iji ya maka ebumnuche na-emerụ ahụ, dịka ọmụmaatụ DDoS na ping, nke nwere ike ịtụgharị n'ime arịrịọ 100.000 na ping kwa nkeji ma ọ bụ kwa nke abụọ, nke nwere ike imebi kọmputa ma ọ bụ netwọk anyị.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike, n'oge ụfọdụ anyị chọrọ ka kọmputa anyị ghara ịza arịrịọ ping sitere n'aka ndị ọzọ na netwọkụ ahụ, ya bụ, ka ọ ghara ịpụta jikọta ya, maka nke a, anyị ga-gbanyụọ nzaghachi usoro ICMP na sistemụ anyị.
Otu esi enyocha ma ọ bụrụ na anyị emeela nhọrọ nzaghachi ping
Enwere faịlụ na sistemụ anyị nke na-enye anyị ohere ịkọwa n'ụzọ dị mfe, ọ bụrụ na anyị enyere nzaghachi ping ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ: / proc / sys / net / ipv4 / icmp_echo_ignore_all
Ọ bụrụ na faịlụ ahụ nwere 0 (efu), yabụ onye ọ bụla na-atụ anyị ihe ga-enweta nzaghachi mgbe ọ bụla kọmputa anyị dị n'ịntanetị, agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị etinye 1 (otu) mgbe ahụ ọ baghị uru ma ọ bụrụ na PC ejikọrọ ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ ga egosi na idi adighi.
Yabụ, na iwu na-esonụ anyị ga-edezi faịlụ ahụ:
Anyị na-agbanwe 0 n'ihi na a 1 anyị pịa Ctrl] + O iji zọpụta, wee pịa Ctrl + + X ka ọ pụọ.
Njikere, kọmputa anyị anaghị azaghachi ping nke ndị ọzọ.
Ndị ọzọ iji chebe onwe anyị pụọ na mwakpo ping
Ọzọ ọzọ bụ doro anya na iji a firewall, na-eji iptables enwere ike ime ya n'enweghi nsogbu:
Mgbe ahụ cheta, a na-ehichapụ iwu iptables mgbe a na-amalitegharị kọmpụta ọzọ, anyị ga-esi n'ụzọ ụfọdụ chekwaa mgbanwe ndị ahụ, ma ọ bụ site na iptables-nchekwa na iptables-weghachite, ma ọ bụ site na iji aka anyị dee edemede.
Ma nke a kemgbe ya 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Chebe kọmputa gị na ping
ezigbo onyinye. Gwa m, ọ ga - enyere gị aka izere arịrịọ maka ịkwụsị ??? dị ka mgbe ha chọrọ ịgbawa netwọk na iji aircrack-ng. Ana m ekwu n'ihi na ọ bụrụ na anyị apụọla, ha agaghị enwe ike izitere anyị ụdị arịrịọ a. Daalụ maka ntinye
Ọ naghị arụ ọrụ ahụ, nke a na - egbochi nzaghachi nkuzi icmp, yabụ ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịnwale njikọ ahụ na rịọ rịọ rịọ kọmputa gị ga - eme icmp echo eleghara ya anya, ya mere onye na - anwa ịlele njikọ ahụ ga - enweta Dị nzaghachi "ndị ọbịa yiri ka ọ nọ ala ma ọ bụ na-egbochi nyocha ping", mana ọ bụrụ na mmadụ na-enyocha netwọkụ na airodump ma ọ bụ ụfọdụ ngwa ọrụ yiri ya, ha ga-enwe ike ịhụ na ị jikọtara n'ihi na ngwaọrụ ndị a na-enyocha ngwugwu ndị ezigara AP ma ọ bụ natara n’aka AP
Ekwesiri ighota, na obu nani nwa oge, mgbe ibidoghari pc gi ka o gha enweta pings ozo, ime ka o rue mgbe ebighi ebi, gbasara ihe mbu na-ahazi faịlụ /etc/sysctl.conf yana na njedebe tinye net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1 na nkwanye ùgwù Nke abụọ n'ọnụ yiri ma "Longer" (Zọpụta Iptables Conf, mee interface interface na-agba ọsọ mgbe usoro amalite, na stof)
Ndewo. Ihe nwere ike ịdị njọ? ma ọ bụ gịnị nwere ike ịbụ? n'ihi na n'ime ubuntu enweghị faịlụ dị otú ahụ ...
Ọ bụ enweghị ntụpọ dị ka mgbe niile.
Obere ihe ngosi, mgbe emechi nano adịghị ngwa ngwa Ctrl + X wee pụọ na Y ma ọ bụ S
Kacha mma n'ọnụ, @KZKG, M na-eji otu n'ọnụ n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ iji melite nche nke PC m na abụọ sava m na-arụ ọrụ, ma zere iptables na-achị, m na-eji sysctl na ya nchekwa nchekwa / wdg / sysctl. d / na faịlụ nke m na-etinye iwu ndị dị mkpa ka ha wee malite ịmaliteghari ọ bụla, bọmbụ sistemụ m ejiri ụkpụrụ niile agbanweelarị.
N'ihe banyere iji usoro a, mepụta faịlụ XX-local.conf (XX nwere ike ịbụ nọmba site na 1 ruo 99, enwere m ya na 50) wee dee:
Na nke ha enweela otu ihe ahụ.
Ezigbo ihe ngwọta dị mfe, daalụ
Kedu iwu ndị ọzọ ị nwere na faịlụ ahụ?
Iwu ọ bụla metụtara sysctl na-agbanwe agbanwe ma nwee ike gbanwee ya site na sysctl enwere ike iji ya n'ụzọ a.
Iji hụ ụkpụrụ dị iche iche ị nwere ike ịbanye na sysctl ụdị na sysctl ọnụ gị -a
Na openSUSE enwebeghị ike idezi ya.
Fasterzọ ọzọ ngwa ngwa ga-eji sysctl
Dịka ekwuru, na IPTABLES ị nwekwara ike jụ arịrịọ ping maka ihe niile site na:
iptables -Ntuziaka -p icmp -j DROP
Ugbu a, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịjụ arịrịọ ọ bụla belụsọ otu ebumnuche, anyị nwere ike ịme ya dị ka ndị a:
Anyị na-ekwupụta mgbanwe:
EBERE IP = 192.168.16.5
iptables -Abịnye -i $ IFEXT -s $ NKWUKWU IP -p icmp -m icmp –icmp-type echo-arịrịọ -m ogologo -dị ogologo 28: 1322 -m ịgba –limit 2 / sec –limit-burst 4 -j ACCEPT
N'ụzọ dị otú a, anyị na-enye ikike naanị IP ka ọ ping PC anyị (mana nwere oke).
Chaị, ọdịiche dị n'etiti ndị ọrụ, ebe windo windo na-ekwu maka otu esi egwu halo ma ọ bụ ihe ọjọọ dị n'ime Linux na-agwụ ụwa ụwa na ihe ndị a.
Zaghachi nye loverdelinux ... nolook.com
Ọ bụ ya mere Windowseros ji mara naanị igwu egwu, ebe Linuxeros bụ ndị maara nke ọma os nke OS, netwọkụ, wdg.
Daalụ maka inye anyị nleta gị 😀
Isiokwu nke bara ezigbo uru ma na - enyere aka ruo n'ókè ụfọdụ.
Zaghachi ka iji ya mee ihe
mgbe windo chọpụta banyere nke a ị ga-ahụ na ha na-ara ara
na iptables na i ghaghi itinye ip na IMPUT na ihe ozo na DROP?